News - Mabda'a shaqada ee shaashadda taabashada capacitive
Mabda'a shaqada ee shaashadda taabashada capacitive
Guudmarka mabda '
Shaashadaha awoodda (Capacitive screens) waxay u baahan yihiin inay garwaaqsadaan taabasho fara badan adoo kordhinaya korantada is-weydaarsiga wadajirka ah. Si fudud haddii loo dhigo, shaashadu waxay u qaybsan tahay qaybo kala duwan, iyo qaybo ka mid ah astaamaha is-weydaarsiga ee aag walba u shaqeeya si madax-bannaan, markaa shaashadda awoodda ayaa noqon karta mid madax-bannaan Xaaladda taabashada ee aag kasta ayaa la ogaadaa, ka dib marka la farsameeyo, taabasho badan ayaa si fudud loo ogaadaa.
Farsamada Capacitive panel taabashada CTP (Capacity Touch Panel) waxay isticmaashaa soo-kicinta jirka bini'aadamka si uu u shaqeeyo. Shaashadda capacitive waa shaashad muraayad isku dhafan oo ka kooban afar lakab. Dusha gudaha iyo isku-darka shaashadda muraayadda ayaa mid kasta lagu dahaaray lakabka ITO (Nano Indium Tin Metal Oxide). Lakabka ugu hooseeya waa lakab difaac ah oo galaaska silica ah oo dhumucdiisu tahay 0.0015mm oo keliya, iyo dahaadh ITO ah oo is-dhexgal ah. Sida dusha shaqada, afar koronto ayaa laga soo qaatay afarta gees, ITO-da gudaha ahna waa lakabka shaashadda si loo hubiyo jawiga shaqada.
Markuu isticmaaluhu taabto shaashadda awoodda, aaladda korantada ee jirka bini'aadamka awgood, farta isticmaalaha iyo dusha shaqada ayaa sameeya kaabayaal isku xira. Sababtoo ah dusha shaqada waxay ku xiran tahay calaamado-isdaba-joog ah, farta ayaa nuugeysa hawo yar, oo ka socota afarta gees ee shaashadda. Xilligan maraya afarta koronto wuxuu aragti ahaan u dhigmaa masaafada laga bilaabo caarada farta ilaa afarta gees. Maamulaha ayaa xisaabiya booska afarta saamiga hadda jira si sax ah. Waxay gaari kartaa 99% sax ah waxayna leedahay xawaare jawaab oo ka yar 3ms.
Guddi awood leh oo la saadaaliyay
Tikniyoolajiyadda taabashada ee gudiga la saadaalinayo ee la saadaaliyay Shaashadda taabashada capacitive ee la saadaalinayo ayaa ah inay kuxirto qaybaha kaladuwan ee istiraatiijiyadda istiraatiijiyadda istiraatiijiga ah ee labada isbarbar ee ITO daaha dhalada tabinta. Qaababka loo jaangooyay ee labada qaybood waa kuwo isku mid ah, waana loo qaadan karaa inay yihiin slider oo si joogto ah u beddelaya jihooyinka X iyo Y. Maaddaama qaab-dhismeedka X iyo Y ay ku kala yaallaan dusha sare kala duwan, a capacitor node ayaa laga sameeyaa isgoyska. Hal slider waxaa loo isticmaali karaa sidii xarigga wadista, iyo kan kale ee loo yaqaan 'slider' waxaa loo isticmaali karaa sidii khadka wax lagu ogaado. Markay hadda qulquleyso hal silig oo xariiqa wadista ah, haddii ay jirto calaamadda isbeddelka awoodda ee banaanka, waxay sababi doontaa isbeddelka kudhaca capacitance ee lakabka kale ee siligga. Isbeddelka qiimaha awoodda la ogaadey waxaa lagu cabbiri karaa wareegga elektiroonigga ah ee ku xiran, ka dibna loo beddelo calaamadda dhijitaalka ah ee A / D kantaroolaha kombiyuutarka si ay u sameyso farsamaynta xisaabinta si loo helo booska (X, Y) ka dib la gaaro ujeedada meeleynta.
Inta lagu jiro hawlgalka, kormeeraha ayaa si isdaba joog ah u siiya khadka wadista, si markaa koronto gaar ah loo sameeyo inta u dhexeysa noodh kasta iyo siligga. Kadib iskaanka sadarka xariiqda dareemayaasha ee sadarka si aad u cabirto isbeddelka awoodda ee u dhexeeya korantada, si loo gaaro meeleynta dhibco badan. Marka far ama taabasho dhexdhexaad ahi soo dhowaado, koontarooleha ayaa si dhakhso leh u ogaada isbeddelka awoodda udhaxeysa noodhka taabashada iyo siligga, ka dibna wuxuu xaqiijinayaa booska taabashada. Dhidibka noocan ah waxaa wada tiro calaamadaha AC-ga ah, jawaabta guud ee shaashada taabashada waxaa laga dareemayaa koronto on dhidibka kale. Isticmaalayaasha ayaa tan ugu yeera‘iskutallaab’ indho-indheynta, ama soo-qaadista saadaasha. Qalabka dareeraha ayaa lagu dhajiyay astaamaha X iyo Y ee qaababka ITO. Marka farta taabato dusha shaashadda taabashada, qiimaha awoodda ka hooseysa barta taabashada ayaa kordheysa iyadoo loo eegayo fogaanta barta taabashada. Baadhitaanka joogtada ah ee dareeraha ayaa lagu ogaadaa isbeddelka qiimaha awoodda. Qalabka xakamaynta ayaa xisaabiya barta taabashada wuxuuna u wargaliyaa processor-ka.